Cilmi baaris la sameeyey aya sheegtey nooca dhiiga ugu badan ee halista ugu jira corona – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Cilmi baaris la sameeyey aya sheegtey nooca dhiiga ugu badan ee halista...
Cilmi baaris la sameeyey aya sheegtey nooca dhiiga ugu badan ee halista ugu jira corona
Baarayaasha Shiinaha waxay soo gabagabeeyeen in noocyada dhiigu ay door ka ciyaari karaan in uu ku dhaco khatarta ah inuu ku soo baxo Coronavirus-ka cusub.
Sida lagu xusay daraasadda lagu sameeyay badhtamaha magaalada Wuhan ee China, hoyga fayraska dilaaga ah, kuwa qaba nooca nooca dhiiga A ayaa u nugul infekshanka Coronavirus, marka la barbar dhigo dhiigaga intiisa kale.
Baarayaasha Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in nooca dhiiga A ay u badan tahay inay u dhintaan fayraska, sidoo kale loo yaqaan “Covid 19”, sida lagu sheegay natiijooyinka uu daabacay wargeyska Ingiriiska ee “Daily Mail”.
Dadka guud ahaan, nooca dhiigga O waa nooca ugu caansan, oo ah 34 boqolkiiba, marka la barbar dhigo 23 boqolkiiba qoyska A, laakiin waxay u muuqatay inay ku kala duwan yihiin dhibta Corona.
Boqolkiiba dadka qaba nooca nooca A ayaa gaarey 41 boqolkiiba, marka la barbar dhigo 25 boqolkiiba kuwa qaba nooca nooca O.
Saami isku mid ah ayaa ka mid ahaa kooxaha dhiigga ee dhimashada ee jirada, 41 boqolkiiba qoyska A iyo 25 boqolkiiba qoyska O.
Dadka qaba Platoon O waxay sameeyeen ilaa 25 boqolkiiba dhimashada, inkasta oo ay ka sameeyeen boqolkiiba 32 wadarta guud ee dadka Wuhan.
Qorayaashu waxay baaritaan ku sameeyeen 2,173 qof oo qaba cudurka Coronavirus, oo ay ku jiraan 206 oo u dhintey cudurka, waxayna barbar dhigeen xogtooda iyo macluumaadka 3,694 ee caafimaadka magaalada.
Laakiin cilmi-baarayaashu ma aysan helin sharraxaad cilmi ah oo ku aaddan sababta kala duwanaanshaha heerarka caabuqa fayrasku ugu kala baxo nooca dhiigga.
Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Washington+...